🥇 ▷ Samyang XP 14mm f / 2.4 dib u eegis ✅
Samyang XP 14mm f / 2.4 dib u eegis
Ballaarinta ballaarinta muraayadaha samyang XP (XPert) waa in la bixiyo tayada sawirka ugu wanaagsan ee suuragalka ah. Xaqiiqdii, Samyang wuxuu sheeganayaa in muraayadani loogu talagalay in lagu dhammaystiro DSLR oo leh dareemo ka badan 50 megapixels. Gudaha 18 walxaha muraayadaha ah oo lagu habeeyay 14 koox dhalo Deluxe ah waxaa ka mid ah laba qaybood oo dabiiciyaal ah, hal maaddo aabe ah, laba waxyaabood oo kala firidhsan oo hooseeya iyo saddex waxyaabood oo sifeyn heer sare ah, dhammaantoodna waxay u adeegayaan yareynta nabaad-guurka, dhalanrog iyo chromatic flare.
Muraayad tayo sare leh oo duudduubnaa si buuxda ayaa loo duubay kiis runtii adag. Giraanta fiiqan ee taabashada leh ee xoqan waxay siisaa dabac aad u aamin ah waxayna leedahay safar dheer oo wareeg ah oo dareere dareere ah, oo ay weheliso cabir xoog leh oo leh qoto dheer oo astaamo ah. Dhammaantood waa kuwo aad u faa’iido badan, maxaa yeelay lens-ka ayaa ah diiradda gacanta oo keliya. Si kastaba ha noqotee, tani dhab ahaan maahan xalka dhibaatada, sababtoo ah muraayadaha balaaran ayaa ku habboon sawirka gacanta, oo leh qotodheer qoto dheer oo qotodheer xitaa godad waaweyn oo muraayadaha indhaha ah, iyo sababta oo ah marar dhif ah ayaa loo adeegsadaa qabashada maaddooyinka xawaareynaya.
Laydhku malahan dabool cimilo, ma jiro xitaa gasket shaabadaysan oo ku haysa muraayadda, laakiin haddana mar kale, suuragal ma ahan in loo isticmaalo muraayadaha noocan oo kale ah mudista dheer dhammaan cimilada oo dhan.
Si ka duwan sida muraayadaha muraayadaha gacanta qaarkood, XP 14mm f / 2.4 ayaa wali ku leh xiriiriyaha korantada muraayadda indhaha si aad ula xiriirto kamaradaada, sidaa darteed waad xakamayn kartaa muraayadaha indhaha ee jirka kaamirada oo aad ku heli kartaa qaab dhismeedka diiradda.
Rokinon SP 14mm f / 2.4 dib u eegis
Muraayadaha Samyang ayaa ah astaanta Rokinon ee Waqooyiga Ameerika, halkaasoo loogu yeero Rokinon SP 14mm f / 2.4 – muuqaalada ayaa isku mid ah, astaanta kaliya ayaa isbedelay.
(Sumcadda Sawirka: Samyang)
Tayada sawirka XP 14mm f / 2.4 aad ayey u wanaagsan tahay, xitaa heerkulka ugu ballaadhan. Sharku waa mid aad u wanaagsan oo aad iskugu dheellitiran dhammaan geedka sawirka. Waxyaabaha loo yaqaan ‘Khatimationer’ waa la iska indho tiri karaa, halka koomaha iyo asturmatism-ka ay yaryihiin. Dhaliilaha Barrel waxaa lagu arki karaa masaafado aad u fog oo diirada la saarayo, laakiin wali way cadahay marka loo eego muraayadaha badan ee tartamaya oo leh dherer isku mid ah.
(Sawirka sawirka: mustaqbalka)
Muuqaalka muujinta ayaa aad ugu wanaagsan dhammaan meelaha, laakiin aad ayuu u sarreeyaa inta u dhexeysa f / 4 iyo f / 11. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu xiisaha badan waa jilicsanaanta xargaha geeska, kaas oo si aan caadi aheyn ugu sarreeya leniska ballaaran.
Xargaha ayaa si muuqata looga arki karaa meelaha cidhiidhi ah, laakiin waligood dhib kuma jiraan oo si fudud ayaa loogu hagaajiyaa Adobe Camera Raw haddii aad tahay qof quruxsan.
… Akhri wax dheeraad ah
Laydhka xagasha ballaaran ee ugu fiican ee Canon
Laydhka xagal ballaadhan ee ugu fiican Nikon
Laydhka ugufiican ee astrop Photography